Star Wars: The Force na-akpọte Review - News Ọchịchị
Star Wars: The Force na-akpọte Review
Isiokwu a na-akpọ “Star Wars: The Force na-akpọte nyochaa - a ikpọ homecoming” e dere site Peter Bradshaw, n'ihi na theguardian.com on Wednesday 16 December 2015 08.02 UTC
Related: Star Wars: The Force na-akpọte - mbụ verdicts-atụ aro 'karịrị ahụmahụ’
Ọ bụ ebe a - na ezigbo nwunye Anọ! Si akpa nkeji ole na ole, ma ọ bụ ọbụna ole na ole mbụ okpokolo agba, JJ Abrams si akpali akpali, ikpọ na seductively-emeghị ihe ọjọọ Star Wars: The Force na-akpọte-egosi onwe ya a nkiri na mmụọ nke mbụ trilogy, nke biri na Nloghachi nke Jedi na 1983. (Onye a na-ewe akụkọ 30 afọ mgbe e mesịrị.)
nyochawa, n'ezie, na e reconfigured dị ka nwunye Six, ma The Force na-akpọte-eme ka ị na-echefu banyere redundancy na pedantry nke prequel-trilogy nke ruru 15 afọ mgbe e mesịrị. O weghachiri ntochi na phantom ize ndụ hapụrụ. The Force na-akpọte bụ na aka ike nke emereme-njem na fun. My naanị obere ndoputa, nke m ga-esi n'ime ụzọ ugbu a, bụ na a obere ọhụrụ Droid onye nwere a bit nke a Scrappy-Doo vibe banyere ya.
The Force na-akpọte re-teta ịhụnanya m nke mbụ nkiri ma tụgharịa m n'ime fanboy n'ime elu m fanboy. E nwere nnọọ ole na ole fim nke m ahapụ m facially ike ọgwụgwụ mgbe grinning maka 135 nkeji, ma nke a bụ otu. Na mgbe Han RockSmith na Chewie abịa on, M nwere mmetụta na sinima m nwere kemgbe m bụ 16: ọ maghị ma à ga-ahụ malitere ibe ákwá ma ọ bụ n'ime kụrụ aka.
Ekiri ikpeazụ ụgbọala na-adọkpụ
JJ Abrams na vetiran ngalaba-onye so dee Lawrence Kasdan kere a film nke bụ ma alụso ọrịa progression si na mbụ atọ fim na a maara mmetụta ịhụnanya ọzọ-gen reboot nke mbụ 1977 Star Wars - Kama ke ẹbọ nke ya ezigbo re-eche nke Kirk / Spock Star mee njem ahụ. maara personae, ọnọdụ na ngwá agha ga-apụta dị ka mkpuchi ma ọ bụ remixes, na meshed na na ọhụrụ storylines. Nke a mara ga-a mma ohere, na mberede, na a triga ịdọ aka ná ntị naanị n'ihi na isi ibé ihe na ihe onwunwe ama na-ekwusa domain.
The mbụ fim mgbe niile bụ ihe ndị kasị pụrụ iche nexus nke onye na nke ezinụlọ dysfunction: a moto nke ikpe ọmụma, ihere na esemokwu. Luke chụpụrụ site na-esiwanye mgbagwoju Freudian animus megide Darth Vader; Han RockSmith kwuru na Narị Afọ Iri nke yiri agụ nkwọ dị ka "o"; nwoke kiriri ume ma mata na Luke na lech n'elu Princess Leia ya ka arụ gold ohu bikini - na mgbe ahụ, na-atọ gị alụso ọrịa sadism, a gwara anyị na ha bụ ndị nne na nna. All a mgbu na-ejikere ịlọ ụwa dị The Force na-akpọte: ọhụrụ contortions nke egwu na nwa-atọ ọchị absurdity Amidst romance na obi ụtọ.
Kpakpando na-ekwu na red kapeeti na Monday si LA premiere
Luke kemgbe famously-anọghị na ndị posta maka nke a film, nke mere ka m na-atụ egwu na mbụ na n'oge gara aga 30 afọ, dị ka Atticus Finch na Harper Lee si Go Set A Onye Nche, Ọ gara n'ebe n'ọchịchịrị akụkụ. Ịpụta ihe ọ na-ekwu na Luke, egwuri site a now grizzled Mark Hamill, bụ nnọọ ihe na-ma unwontedly enigmatic ọnụnọ.
Related: Hollywood awards ọkachamara na-ebu amụma Oscars ịga nke ọma n'ihi na The Force na-akpọte
Princess Leia bụ now a General ma ka na-warrior eze nwaanyị ndị na-eguzogide – a siri ike karị na ndị ọzọ grandmotherly ọgụgụ. The ọchịchịrị ike bụ apụtaghachi na ụdị nke mbụ Order, n'uche ka re-ekpebi ihe a ọzọ hoo onye fasizim akara, na-azọrọ-Nuremberg rallies. Dị malite megide ha bụ ndị ọhụrụ alụso ezi. E nwere Rey, a nkọ n'ichepụta ọkọbọhọde na n'ime ime mbara ala nke Jakku, onye na-ele ebe nketa n'ime ya: ọ na-egwuri site ọhụrụ ahụ bịaranụ Daisy Ridley na kenkuwa mkpebi siri ike nke a na-eto eto Keira Knightley. British omee John Boyega-arụ Finn, onye bụbu oké ifufe trooper na-achọ mgbapụta site arara ya ọjọ nke nna ukwu.
Nke a na-eweta m ka kemmenyeujo arụmọrụ site na Adam Driver dị ka Kylo Ren, ọhụrụ Gbara Ọchịchịrị Jehova na a egwu nzuzo. Ọ bụ gorgeously obi ọjọọ, ituiro na-ejighị - na n'adịghị ka Vader ochie, ọ bụ nyere petulant iwe ọkụ, ya lightsaber mmasị, mgbe yi yunifọm subordinates nwere unwelcome ọrụ nke na-agwa ya nke ụfọdụ ndị ọhụrụ, nwa oge mmeri maka Nguzogide. Akwọ ụgbọala fọrọ nke nta unreadably droll ọdịdị ihu dị ezigbo ruru eru ka Kylo Ren si fastidious na amused nlelị nke ndị iro ya "adịghị ike na ọmịiko. E nwere amamiihe oge mgbe ọ na-eji telekinetic ike nke Force megide a laser shot.
Ekiri nke abụọ ụgbọala na-adọkpụ
The lightsaber n'asọmpi onwe ha na-N'ezie ọzọ egwuregwu karịa ke 70s na 80s ma n'ụzọ ụfọdụ ihe n'ọnọdụ yiri n'anya mmadụ na-akpali: Rey onwe ya achoghidi ndisụhọrede ndụmọdụ si n'aka mmadụ ma na ejighi ngwaogu ọgụ ma ọ bụ na-efe efe Narị Afọ Iri nke yiri agụ nkwọ.
JJ Abrams nwere bu pụta ụwa ọmịiko maka kpochapụwo Star Wars Okirikiri ala na-atọ ha si na Elan: mgba ọkụ si ụyọkọ kpakpando ka shadowy ọhịa na N'ezie ọgụgụ asọ desat. Na ọ fọrọ nke nta mbụ ya n'ile, Rey, a hụrụ tobogganing ala a nnukwu akwa on a sled mere nke eriri. N'ihi na m na ọ bụ a ncheta bụ na ọ bụ ezie na nke mbụ Star Wars na-kwupụtara n'ezoghị ọnụ na mmụọ nsọ site Kurosawa si The Zoro Ezo Ebe e wusiri, Echere m na ọ na mbụ ewepụtara ya anya site David dabere na Lawrence nke Arabia ma ọ bụ ọbụna ndị dreamscapes nke Dali.
Related: Star Wars: The Force na-akpọte - gị mmekọrịta cheat mpempe akwụkwọ
Ma nke N'ezie a film bụ akụkụ nke ihe ntụrụndụ ụwa nnukwu ya mkpa izo aka nanị onwe ya. The Force na-akpọte adịghị, na n'uzọ ọzọ franchises, ịdị mkpa ka ịbụ "gbara ọchịchịrị" - enwe n'ezie ajụwo n'ọchịchịrị akụkụ. N'ụzọ bụ isi ike tinyere on a oké surging riptide nke idealism na nchekwube, na ezinụlọ-nkiri ụkpụrụ nchịkwa nke ụfọdụ eleda na-egbu anya na dystopian ọdịnala Sci-Fi. N'ezie, Star Wars ugbu a na-arahụ gabiga Sci-Fi genre ka ya ụdị intergalactic azọrọ-Arthurian romance: na na a nloghachi na ụwa nke ụtụtụ Saturday foto. The Force na-akpọte bụ mkpari na melodramatic na sentimental n'ezie, ma na-akpali akpali na ezigbo obi ike na ya ụdị mmesapụ aka. Ihe a Christmas ugbu.
• Star Wars: The Force na-akpọte a tọhapụrụ na mba UK na Australia on 17 December na na US on 18 December
← The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 20-16 The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 15-11 →